HomeAfaan OromooQeerroon abidda Galaanni dhaamsuu hindandeenye!
Qalbeessaa Dhangi’aa, Gurraandhala 7, 2021
Qeerroon of kennitoota sabaa waan qaban gadi hindhiifnedha!
Qeerroon erga ijaarmaa aanjaa’aa tolfatee as, danqaa fi gidiraan itti hammaatu illee humna jabaa sagantaaf kaayoo baheef hinjijjiirre ta’ee qabsoo isaa hanga har’aa itti cicheera.
Sochiin dargaggoota Oromoo sagantaa bilisummaa saba keenya Oromoo irratti ijaarame. Kana mirkaneessuufis erga gaafa sochii fincilaa, warraaqsa addunyaaf fakkeenyaa kaasuu jalqabee as sagantaa isaa utuu hinjijjiirin dhommoqa siyaasaa tokko malee jiraatee har’a gaheera.
Quuqama saba isaa fi ofitti fudhachuun ba’aa saba isaa baachuu kan filatu Qeerroon, Abidda Galaanni dhaamsuu hindandeenye ta’ee bifa mogolee diinaa buusuun daranuu dagaagee har’a gaheera. Sochiin Qeerroo saba isaa Oromoof mogolee fi abdii ta’uudhaan erga ijaaramee sochii eegalee as har’a gaher jira. Sabni keenya ilaalcha injifannoon akka guutamu, injifachuufis saba humnaaf gahumsa qabu ta’uu isaa uummatatti agarsiiseera.
Sochii hanga ammaatti aarsaa itti kaffaluudhaan, du’aa fi hiraarsaa hunda damdamachuun harka qullaa yakkamtoota saba dararan kanneen humnaa fi qawwee qaban dura dhaabbatee taasiseen Oromoon garboomuu akka hindandeenye humna agarsiise ta’eera.
Akeekii fi sagantaan inni qabatee qabsootti seene akka hinjajallanneef hinsharafamne eeggitii qabsoo isaatti taasisuun ammoo humna waan qabe gadi hindhiifne kan waan jedhu raawwatu akka ta’e raagessise.
Humni Qeerroo Oromoo humna barate ta’uun, humni barate kun ammoo biyya isaa jijjiiruuf dirqama qabaachuu isaa halagaaf firatti agarsiiseera.
Sochiin Qeerroo kan bara 2011 waggaa kudhan dura ijaaramsa jabaa ta’uudhaan, jaarmiyaa of danda’e ta’ee erga labsamee as sosochii isaatiin injifannoowwan heddduun argamaniiru.
Dhimma Qeerroo ilaalchisuudhaan qorannaa bara 2020 keessa Dr. Moosisaa Aagaan katabaman irraa hundeeffamaa fi karaa Qeerroon Bilisummaa Oromoo bara 2011 akka lakkoofsa faranjiitti ittiin of ibsaa ture eeranii jiru.
Qorannoo sanaan “Qeerroon sirnaan bara 2011 erga hundeeffamee booda karaan jireenyii fi sochiin Qeerroo
calaqqisaa fi qabamatamaan of-mul’isaa ture hedduu dha.
i. Marsariitii Qeerroo (website)
ii. Raadiyoo Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo (SQ)
iii. Hawwisoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo
iv. Tumsa Qeerroo Idil-addunyaa (International Qeerroo Support Group)
hanga tokko dha.” Jechuun kaahuu.
Eebla 13,2011 waggaa kudhan dura ibsa diddaan Qeerroo hanga Bilisummaatti akka itti fufu akeeku, kan mata dureen isaa “Diddaan Qeerroo Hidhaa fi Ajjeechaan Hin Dhaabbatu!” jedhu gola Websaayitii Qeerroo keessatti maxxanfamee ragaaf taa’eera. Kun Qeerroon Amna dheeraa adeemuu fi hoggana jabaataa qabaataa as gahuu kan agarsiisuudha.
Qaamoleen Qerroon hoggana hinqabu, ijaarmaa hinqabu jedhan gufuuleen qabsoo Oromoo danuun turaniiru. Isaan kunneen warra Oromoo garboomsuu barbaadan ilmaan Habashaa fi kanneen qabsoo Oromootti gufuu ta’anii dantaa alagaa irraa argataniin jiraachuuf hawwan ta’uu hojii fi seenaan Qeerroo nii hubachiisa.
Marsariitiin Qeerroo.org kan jaarmiyaa warraaqsaa kun dhimma itti bahu, Bitootessa 22, 2014, barattoonni Oromoo godina Shawaa Kibba Lixaa, Mana Barumsa Haruu
Cululleetti hiriira mormii geggeessuu gabaasaa isaa yerosiin ibseera.
Jaarmiyaan Qeerroo kun Caamsaa 13,2014 “Gaaffii Mirgaa Ummatni Oromoo Kaaseef Deebiin Mootummaan Wayyaanee Keenne Gocha Suukkanneessaa Dha!” Jechuudhaan ibsa baasuudhaan gochaa gara jabinaa baatii Eebla keessa barattoota Yuunibarsiitii Oromiyaa keessatti raawwate balaaleffateera. Ibsi kum har’allee Websita Qeerroo irratti kan argamudha.
Caamsa 14, 2014 keessa sababaa aochii warraaqsaa baatii Eebla keessa Yuunibarsiitii Jimmaa keessatti ka’eef barattoonni 3 Yuunibarsiitii jimmaa irraa hidhamuu Websitee kana irraa seenaa ta’ee ol kaahameera.
Qeerroon Bilisummaa Oromoo sochii bara 2014 keessa ijaarsa tolaaf taliila’aa ta’ee bifa namuu beekuu hindandeenyeen humna warraaqsaa dhokataa Oromiyaa keessatti banbanseen gaaffilee bu’uuraa wayiita sanatti gaafate muraasi hanga tokko toora akka qabatan taasisuu danda’eera.
Keessattuu sochiin saamicha lafa Oromiyaa kan daangaa irraa fi addatti saamicha lafa Oromoo Finfinnee fi naannaawaa Finfinnee akka dhaabbatuuf shoora irraa eegamuun karaa nagaan fincila taasiseen humna afaan Qawween Afrikaa sodaachisu humna TPLF laaffisuu danda’eera.
Kana malees dhimmi lafa Oromoo haalaan xiyyeeffatamee saba keenyaan akkasuma dhaabbilee siyaasaaf dhaabbilee hawaasaa, akkasuma dhaabbilee sivikii Oromoon qabuun xiyyeeffannoon akka ilaalamu daandii saaqeera.
Ilmaan Oromoo gaaffii Bilisummaa waan gaafatan qofaaf akkuma har’aa kana mana hidhaatti darbataman, humna fincila Qeerroon akka mana hiraarsaa irraa lakkifaman daandii furmaataa guddaa ta’eera.
Biyyattii keessatti daranuu sirna EPRDF qaama isaaf qaama alaan kan sodaatamu humna TPLF sodaa tokko malee dura dhaabbachuudhaan aarsaa qaalii lubbuu itti gabbaraa, dhiigaa dhangalaasaa akkasuma lafee caccabaa yakkamtoota TPLF impaayera Itoophiyaa keessatti sodaataman akka laaffatan taasiseera.
Humni dhaadannoo diinaan akkasuma meeshaaf dipiloomaasii diinaa sodaatee hinbeekne Qeerroon, hanga gahu addunyaatti agarsiisuu keessatti jaarmiyaa goota fakkaataa hinqabne kan Impaayera Itoophiyaa keessaa ta’eera.
Humni Qeerroo dhaadannoo TPLF’f gurra osoo hinlaanne, lubbuu isaa sabaaf biyya abbaa isaa Oromiyaaf gumaata laachuuf waakkii kan hinbeekne sochii taasiseen qaa’aa furmaataa saba isaatti agarsiiseera.
Bara kanas sochii isaan erga EPRDF caccabseen booda, murna maqaa PP jedhuun biyyattii dhuunfate irratti akka qaamni kun gara aangotti dhufeen akkasuma dursee balaaleffataa tureera.
Qeerroon Itoophiyaa ijaaruuf lubbuu hinlaanne. Qeerroon Oromoo fi Oromiyaa ijaaree eeggitii itti taasisuuf of wareege. Kanas hojiin agarsiise. Qeerroon sirna morma. Sirni Qeerroon mormu sirna yakkaan harki isaa laaqame, sirna ajjeesaa, sirna hiraarsaa saba irratti raawwatu fincila. Akkasuma sirna daguuggaa sanyii saba nagaa irratti raawwatu morma.
Qeerroon nagaa jaallattoota, qabsoo ijaarmaatti amanudha. Nagaa saba isaa kan mormi haxaa’uu, yakkamtoota bakkatti galchuuf adabuun wiirtuu nagaa Oromoo hundeen gadi dhaabuun akeeka isaa ifaaf mul’ataati.
Tibbana gochaa waggaa 3 oliif waraanni PP uummata irratti raawwatan mormuudhaan fincila kaasee jira. Fincilli kun sochii waraanni biyyattii keessatti taasisu, gocha balfamaa dararaa uummata nagaa irratti raawwatu kan mormudha.
Akkasuma akeeka qabsoo isaa Bilisummaa labsachuun gaaffiin saba Oromoo akka deebi’u gaaffii deebii hatattamaa barbaadu kan gaafatu ture. Sochiin kun itti fufee nii adeema.
Walumaa gala humni Qeerroo Abidda Galaanni dhaamsuu hindandeenye, abidda yakkamaa haxaa’udha. Yakkamaa yakka isaa irraa deebi’uu dide adabuun, gochaa seermaleessummaatti eeggitii gochuun nagaa waaraa sabaaf argamsiisuudha.
Gurraandhala 7, 2021